निर्जिव प्रेम भित्र तिमी – मझेरी डट कम
निर्जिव प्रेम भित्र तिमी
अस्तव्यस्त कोठा, सबै लथालिङ्ग अनि भताभुङ्ग। मानौ भर्खरै कुनै महाभुकम्प या प्रलय आएजस्तो। छ्या! हेर्दै विरक्त लाग्ने कोठाको स्थिती तर जागर चलेको छैन मिलाएर बस्ने। त्यसै पल्टिएर बसेको छु कुनामा रहेको थोत्रो खाटमा। चुरोट सल्काउछु, लामो सर्को तान्छु । आज साह्रै आनन्द लाग्दैछ चुरोट तान्नर । अधेरो कोठा धुवामा रुमल्लिएर आफ्नो अस्तित्व हराउदैछ। साला धुवा मानवआकार बनेको देख्छु‍। नारी आकृति त्यो पनि तिम्रो। भ्रममा छु कि भनि आखा मिच्छु। हरेक सर्कोको तनाइपछि फालिएका धुवा तिमी बनेर नाचिदिन्छ। पटक्कै नरुचाइएको दृष्टि। छेउको एष्ट्रे तानेर निभाइदिन्छु चुरोट, किचिमिचि पारि। कुनै नारी आवाज गुञ्जिान थाल्छ। सुन्न नचाहेको बोलि तर प्रष्टध गुञ्जिदरहेका एक एक शब्दले मेरो कान टट्याउछ।
उसको आत्मिक प्रवेश, कारुणिक भेषमा। छ्या! कस्तो पिछा नछोडेको तिमीले मेरो। को हौ तिमी? त्यही बाटामा हिड्दै गर्दा भेटिएकी एक केटी। किन बोलेछु तिमीसँग? केही सार्थकता छ तिमीसँगको चिनारीको? हामी नचिनिएका भए के हुन्थ्यो? हो, आज म यसरी विक्षिप्तह मन बोकि पागलरुपी व्यवहार र अन्धकारमा रम्ने थिइन।
तिम्रो अनुनय विनय शुरु………मैले घृणा गर्ने तिम्रा आखाबाट बगेका आशु अनि भिजेका प्रश्न हरुको वर्षात। प्रत्युत्तर नदिने मेरो चाह। भुईतिर निहुरिन्छु। तिमीले बुझ्न नसकेको मेरो मौन अभिव्यक्ति। तिम्रो अबुझ मनले आशा गरेका जवाफहरु म दिइरहन अनुचित ठान्दछु र फेरी मौनता दर्शाइदिन्छु। तिम्रो मुहारको मलिनता र अनुहारभरि कोरिएका करुणारुपी रेखाहरुले मलाई अवश्य खिच्न सक्दैन। अझै के अपेक्षा राख्छौ तिमी म बाट? स्विकारोक्ति जवाफ? अह! को हौ र तिमी मेरो? आखिर किन स्विकारौ तिमीलाई म? केही कारण या बाध्यता छ र तिमीजस्तो घृणित नारीलाई स्विकार्नुको? नाई, म सक्दिन दयाभाव देखाउन र चाहन्न तिमीसँगै कलङ्कित हुन। तिमीसँग समिप्यता दर्शाए, निकटता बढाए त के यसको मतलव तिमी मेरी प्रेमिका थियौ? हो तिमीलाई माया गरे तर तिमीले अधिकार दिएनौ। अहिले प्रेम माग्छौ तर त्यसको लायक तिमी रहेनौ। तिमी शारीरिक रुपमा सुन्दर छौ भन्दैमा तिमीसँग बोल्ने र तिमीलाई हेर्नेले प्रेम पोखेको हुन्छ? प्रेमको अर्थ थाहा छ तिमीलाई? जाऊ उसलाई गएर सोध जसले तिम्रो शरीरसँग खेल्यो। तिमीलाई तृप्तीु दिदा के उसमा प्रेमको भाव झल्किएको पाइनौ? कति प्रेम गर्यो उसले तिमीलाई अनि कहाँ कहाँ प्रेम साटासाट गर्यौ तिमीहरुले? कहाँ कहाँ प्रेम भेट्यो उसले? तिम्रो छातिमा? गालामा……ओठमा……या…………………?
मेरो कुरा सुनेर किन आशु बगाउँछौ? केको प्रतीक हो तिम्रो पानीरुपी आशु? के अर्थ बोकेको छ यस आशुले? म पटक्कै पग्लिन सक्दिन तिम्रो आशु र रोदन देखेर। अझ मेरो क्रोधको सीमा बढाउँछ तिम्रो आशुले। तिमीलाई लाज लाग्दैन म सँग प्रेम गर्छु भन्नलाई? आशु बगाएर पाइने वस्तु हो प्रेम? या बजारमा पैसा तिरेर उपभोग गर्न पाइन्छ प्रेम? कि प्यास मेटाउने साधन हो प्रेम? अह! तिमीमा कुनै पनि कोणबाट प्रेम पहिल्याउन सक्दिन म। त्यसैदले जाऊ अन्तै मैले दिन नसक्ने प्रेम खोज्नलाई।
लामो सास फेर्छु। चुरोट सल्काउछु र एकछिन आखा चिम्लदै धुवामा शान्ति पाउने प्रयत्न गर्छु। फेरी उसको झिझर लाग्दो बोलिहरु…………। कस्ती केटी चुरोट पो माग्छे। आवश्यकताको लागि म चुरोट तान्छु तर ऊ केका निम्ती? उसको तनाइमा के छ? आनन्द, गौरव, पीडाबाट उम्कने प्रयास या नपाएको प्रेमको खोजी? म एकनासले उसले चुरोट तानेको हेरिरहन्छु। एकछिन भएपनि उसको बोलि सुन्न नपरेको क्षण। कति शान्त। उसले फालेका धुवाहरु अश्ली लताको प्रतिविम्बर बोकि कोठाभरि रुमल्लिएको देख्छुध। प्रेम निल्छे अनि प्रेम नै फाल्छे। ऊ भित्र प्रेम रहिरहनै सक्दैन। उसको सुन्दर मुहार पनि कुरुप देख्नु थाल्छु। छ्या! दुनियासँग प्रेम साटेको तातो आलिङ्गन र चुम्बनका दृश्यउ अनि छापहरु पोतिएको कलङ्कित अनुहार।
मेरो आखा बल्न थाल्छ क्रोधले। उसको शरीरको अस्तित्व मेटाउन मन लाग्छ्। उसलाई झम्टिन पुग्छु अरुले झै उसँग प्रेम गर्न होइन। उसलाई र उसको कलंकलाई मेटाउन। एकैछिनमा उसको शरीर चिसो हुन्छ। म फेरी खाटमा गई चुरोट तान्दै बस्छु। कति सुखदाभाष भईरहेछ मलाई अहिले। उ सुतेको हेर्छु। अघिको विरुप मुहार अब सुन्दर देखिएको छ। उसका शरीरका प्रेमका नमिठा दागहरु र स्पर्शका घृणीत रेखाहरु सबै सबै मेटिएको छ। बल्ल मेरो मनमा ऊ प्रति माया जागेको छ। ह्रदयदेखि नै स्विकार गर्न चाहिरहेछु उसलाई। उसको स्वार्थ पोतिएको मुहार प्रेमभावले तेज भएको छ। कोठाभरि प्रेमको सुगन्ध फैलिएको छ। उसको अघिदेखिको एकोहोरो प्रस्ताव सुन्न प्रतिक्षा गरिरहेछु।
अब एकपल्ट भन न म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर……साच्चैि मेरो जवाफ तिम्रो अपेक्षा अनुरुप हुनेछ।